प्रेम खेल होइन - Current Nepal News
प्रेम खेल होइन
| 6008 Views | Published Date : 19th April 2016 |
बिहानी मै फोनको घण्टी बज्यो । दिदि नमस्ते म बर्षा बहिनी हो । मैले हेलो मात्र के भनेको थिए । उताबाट आफुलाई परिचय गराउदै उनि बोलिन् । एक छिन् त म छक्क परे किन कि मेरो आफ्नो नाम पनि बर्षा नै थियो । कसलाई खोजेको हो र भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले मलाई हजुरको नम्बर सरोज दाईले दिनु भएको हजुरसँग भेट्ने भन्नु भएको छ । मलाई तपाईले चिन्नु हुन्छ र ? त्यसरी त चिनेको छैन् । तर हजुर धेरै राम्रो हुनुहुन्छ रे आफ्नो कुरा राख्नु भटेर भन्नु भएको छ । दिदि पिलिज म निकै पिडामा छु । मलाई आज भेट्नु न पिलिज । उनले त्यति भने पछि कता कता माया लागेर आयो सोचे उनलाई भेटर उनको कुरा सुदैमा मेरो के जाने हो र ठिक छ । बानेश्वर तिर आउनु २ बजे पछि त्यहि भेटौला ।
फोनको सम्ँवाद सकिए पछि एक छिन मैले उनलाई के पो भएको होला भनेर सोचे । ओ हो बिहानको ९ बजि सके छ राति ढिलो सुतिए छ । कति बेला खाना पकाउनु खानु अनि कोठा बाहिर जानु होस बाहिर खाने निधो गरेर म कोठाबाट हिडे । तर मनमा उनि बर्षाकै कुरा खेले । उनको र मेरो नाम मिल्नु कतै मेरो जस्तो जिवन त होइन उनको पनि सौचदै थिए । फेरि फोनको घण्टी बज्यो कविता दिदिको फोन रहेछ । कता छौं बर्षा अखिलको चुनाबमा आउने होइन ? दिदिले मलाई प्रश्न गर्नु भयो । सम्पादकले गरेको गल्तिले पुरै अफिस स्टापलाई एकै चोटि पिडा पर्या छ । अखिलको चुनाबको फोटो खिचेर के गर्नु दिदि । आउन भेटघाट हुन्छ तिमीले फोटो दिदा त अरु मिडियामा पनि फोटो जान्छ नि । दिदिले त्यति भने पछि मैले कुरा बुझि हाले उहालाई मसग भेटन म छ । मन त मलाई पनि छ । अखिर हामी छोटो समयको चिन्जानमा नै नजिक भएका थियो । हुन्छ म आउछु , भनेर म प्रज्ञा भवन तिर लागे जहा अखिलको महाधिवेशनको रौनक थियो ।
तर मेरो मनमा भने उनै बर्षाको मात्र कुरा खेलेको थियो । घडीमा २ बजे छ । अब उनलाई भेटन् जाने भनेर निसकिदै थिए । फोनको घण्डी बज्यो हेलो मात्र भनेको थिए । उताबाट आवाज आयो दिदि म आउदै छु । बानेश्वर कहा भेटने । तिमी कहा हो भनेर मैले भने उनले आफु पुतलीसडक भएको बताईन ।
ओ हो म कमलादीबाट आउदै छु । हामी पुतली सडक नै भेटौ ल । उनले हुन्छ भन्दै सहमती जनाइ । हेर्दा स्मार्ट देखिने अनि सुन्दर रहे छिन् बर्षा मैले चित्रण गरे भन्दा धेरै फरक । उनले नमस्कार गर्दे माफि मागिन् । हजूरलाई मैले गर्दा दुख भयो भन्दै । मैले होइन ठिकै छ । भन्नु के हो कुरा भनेर सोधे । उनको अनुहार कालो भयो मानौ मैले के के नै भने जस्तो । किन के भयो भन्नु न । उनले दिदि मलाई तपाईले गल्त नसोच्नु मलाई सबैले गल्त सोचे तर म गल्त छैन् ।
मैले त उसलाई माया गरेको थिए । त्यो पनि साचो माया तर उसले खेल सोच्यो त मैले के गरु दिदि । उनले एक सास नफेरि त्यसरी भन्दै गर्दा म अनुमान लाउन सक्छु यो प्रेमको कुरा हो । त्यो प्रेम जुन अहिले बजारमा सस्तो भएको छ । प्रेम कै आड लिएर , यहा मान्छेले मन लाग्दि गरेको सुन र देख्न पाएका छौ । उनले आखा भरी आशु ल्याउदै भनिन् । मलाई त कहिले काहि लाग्छ यो संसारमा बाच्नु पनि अब के अर्थ । मैले के गरु भन्ने सोच्न सकेको छैन् । सरोज दाईले मेरो एउटा बहिनी छ यो बिषयमा तिमीलाई के गर्ने सल्ला दिन सक्छ भेट भन्नु भएकोले म हजूरलाई भेटन आएको दि ।
उनले यति भन्दै गर्दा मैले प्रैममा परेका धेरै पात्रहरु सम्झे । म बुझन सक्थे उनि कति पिडामा छिन् । हो बहिनी तिमी गल्त पनि छैनौ अनि नरामैो नि केहि गरेकी छैनो । कसैलाई चाखो प्रेम गर्नु पाप पनि होइन , तर तिमीले भनेको अब बाच्नुको अर्थ छैन् भनेका एक- एक शब्दहरु भने सबै गल्त छ । यसमा भने तिमी गल्त छौ ।
मैले यति भने पछि उनि मलाई एकछिन हेरिरहिन् । अनि थपिन् । दिदि तपाईलाई थाहा छैन् । मलाई कति पिडा भएको छ । तिमीलाई पिडा होइन तिमीले आफैलाई आफैले पिडा दि रहेकि छौ । एउटा प्रेमि तिमीलाई रुवाएर हासि रहेको छ भने तिमीले उसले दिएको पिडाको जवाफ दिएर हासेर जिबन जिउन सक्ने क्षेमता राख्नेकि नाइ ? आखिर तिमीमा तिम्रो त्याो प्रेमि भन्दा केमा कमि छौ र ? के तिमी हासेर बाच्न सक्दैनौ ?
मैले यति मात्र के भनेको थिए । उनि जोडले रुन थालिन् । वारीपरिका मान्छेले पनि हामी तिर नजर लगाए । तर जोडले रोए पछि उनि जुन बर्षा भएर निसकिन् । म पनि एकछिन् अच्चम परे के यो त्यहि केटि हो जो अघि सम्म बाच्नुको अर्थ छैन् भनिरहेकी थिइन् ।
हाम्रो भेट अहिले पनि हुन्छ । हामी फेसुकमा पनि कुरा गर्छे । तर मलाई अब लाग्दैन् । उनि उहि बर्षा हुन् जो मसग रुदै भेटन् आएकि थिइन् । अहिले उनि एउटा एनजिओ मा काम गर्दे छिन् । जिवनको अर्थ बुझेकि छन् । अनि भन्ने गर्छिेन् । दिदि अब मर्ने कुरा गर्दिन् ल । म यसमै खुशी छु , कि उनि खुशी छिन् । तर आजभोलि प्रेमलाई एउटा खेल सोच्नेहरुको कुनै कमि छैन् बजारमा ।